Nepalistudio » कांग्रेसले आफ्नो ‘पाप’ पखाल्यो, नेकपाले के गर्छ ? कांग्रेसले आफ्नो ‘पाप’ पखाल्यो, नेकपाले के गर्छ ? – Nepalistudio
कांग्रेसले आफ्नो ‘पाप’ पखाल्यो, नेकपाले के गर्छ ?
डा. केसीको अनसन गाँठो कसरी फुकाउने भनेर उनले छलफलका लागि दाहाल र केपी अोलीलाई सिंहदरबार डाके। केदारभक्त माथेमा कार्यदलका सदस्यलाई डाके। दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदाका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई पनि डाके। त्यो साँझ राजनीतिज्ञ र माथेमा कार्यदलका सदस्यबीच चिकित्सा शिक्षाबारे जमेर छलफल भयो।
देशमा मेडिकल कलेज अभाव भएर नेपालीहरू मेडिसिन पढ्न बाहिर गइरहेको कुरा उठ्यो। छलफलबीच कार्यदल सदस्य डा. भगवान कोइरालाले उठेर भने— डाक्टर बन्न चाहनेहरू नेपालमा पढ्न नपाएर विदेश जान्छन्, अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने धेरैलाई लाग्छ, त्यो साँचो हैन। भ्रम हो। यसबारे म केही भन्न चाहन्छु। त्यसपछि उनले नेपालमा मेडिकल कलेजको संख्या, नेपाललाई चाहिने डाक्टर संख्या, विदेश जानेको संख्या किन घटिरहेको छ, किन केही विद्यार्थी अझै विदेश गइरहेका छन् लगायत चिकित्सा क्षेत्रका विकृति र सुधारबारे लामो व्याख्या गरे।
कोइरालाको कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले भने— ल ! मैले त यी कुरा बुझेकै थिइनँ। मलाई त विद्यार्थी बाहिर लैजानेको पक्षमा डाक्टरले काम गरिराछ भनेका थिए। मलाई पनि हो जस्तो लाग्थ्यो। डा. केसीले १४ पटक अनसन बसिसकेपछि र राज्यले १४ पटक नै उनीसँग सम्झौता गरिसकेपछि पनि कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाको केसीबारे बुझाइ त्यति सतही र गलत थियो। त्यसमा अचम्म मान्नुपर्ने केही छैन। मेडिकल शिक्षाबारे देउवाले जसको कुरा सुन्थे, जोसँग उनको संगत थियो, त्यसले उनको बुझाइ निर्धारण गरेको थियो।
यसरी सूचीबाट नाम काटिनेमध्ये एक थिए, खुमा अर्याल। भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक। देउवाले पाएका दुई सिटमध्ये एकमा अर्याल सिफारिस भएका थिए। अर्यालले चुनावका लागि दिएको पैसा पनि गयो, सांसद सिट पनि गयो भन्दै साथीभाइसँग पछि गुनासो गरे। चिकित्सा शिक्षाबारे नेताहरुका धारणा बेडरुमसम्म पहुँच भएका तिनै मेडिकल व्यवसायीले बनाउने हुन्। नेताहरूलाई अरुका कुरा धेरै सुन्ने फुर्सद पनि हुन्न। धन्न देउवाले त्यस दिन माथेमा कार्यदलका सदस्यलाई बोलाए र यथार्थ बुझ्न पाए। सिंहदरबार छलफलको अन्त्यमा देउवाले ‘डा. केसीको अनसन कसरी समाधान गर्ने, समान धारणा बनाअौं’ भने।
बोल्ने पालो आएपछि अोलीले त्यहाँ छलफल भएका विषयमा आफ्नो कुनै राय राखेनन्। चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे कुनै तर्क-वितर्क गरेनन्, जसरी आज पनि गरिराखेका छैनन्। यति भने, ‘कोही अनसन बस्दैमा म उसका सबै कुरा मान्ने पक्षमा छैन।’ त्यसपछि देउवातिर फर्केर प्रश्न गरे— म अनसन बसेँ भने तपाईं मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुन्छ?
त्यो बैठक त्यतिकै टुंगियो। देउवाले छलफल जारी राखे। सायद त्यस दिन उनमा मैले त बुझेकै रहेनछु भन्ने पर्यो। सायद डा. केसीको अनसन सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीले पनि थिच्यो। त्यसपछि केदारभक्त माथेमासँग छलफल गरे। डा. केसी र उनका टिम बोलाएर छलफल गरे।
उनले देउवालाई सम्झाए— अब सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका बढाउँदै जाने नीति लिएर अगाडि जाउँ। त्यसले मुलुकलाई राम्रो हुन्छ, हामीलाई पनि राजनीतिक फाइदा हुन्छ। सत्ताको दाउपेचमा यस्ता ‘नीति’ ले पार्ने प्रभाव देउवालाई थाहा नहुने कुरै भएन। उनले दाहालसँग कुरा गरे। डा. केसीका सबै माग समेटेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गराउनुपर्यो भनेर सम्झाए।
दाहाल पछि सरे, नारायणकाजी र गिरिराजमणिलाई जिम्मा लगाइदिए। दाहाललाई माओवादी ‘जनयुद्ध’ समयका आफ्ना कार्यकर्ता तथा बिएन्डसी अस्पतालका मालिक दुर्गा प्रसाईंको ‘गुन’ तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो। संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न माओवादीले साथ नदिने देखेपछि कांग्रेसले अध्यादेशको बाटो समात्यो। डा. केसीका लगभग सबै माग समेटेर चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्यो।
यसमा एउटा कारण नेता-कार्यकर्ताको व्यक्तिगत इमान पनि हो। सत्तामा हुँदा होस् विपक्षमा, एउटै इमानमा अड्ने नेता-कार्यकर्ताको विवेक, आत्मविश्वास, तर्क गर्ने क्षमता, पार्टी भित्र-बाहिर लड्न सक्ने शक्ति बलियो हुन्छ। सत्ता र सडकको चक्रसँगै जसको ‘इमान’ ले पिङ खेल्छ, उसँग बोल्ने मौलिक कुरा हुन्न। धेरै आँट हुन्न। सरोकार पनि हुन्न। किनभने उसको ध्याउन्न अरु नै हुन्छ।
कांग्रेसलाई लागेको होला, नेकपालाई चिकित्सा शिक्षा मुद्दामा यसपालि झुकाउन सके आफ्नो जित हुन्छ। सँगसँगै यो पनि लाग्दो हो, केही गरी नेकपाले यो मुद्दा सल्टाएन भने दीर्घकालसम्म कांग्रेसले बलियो राजनीतिक मुद्दा पाउनेछ। आजसम्म आफूले बोकेको ‘पापको पोको’ नेकपाका काँधमा सर्नेछ। नेकपा नेता-कार्यकर्ताले ठन्डा दिमागले सोचून्— डा. केसी अनसनको उचित हल खोजेर पछिका लागि आफूलाई सजिलो पार्ने, वा अहिलेलाई आफ्नो हठको जित खोजेर दीर्घकालमा पार्टी र मुलुकलाई नोक्सान पार्ने?
५ श्रावण २०७५, शनिबार प्रकाशित